UZA NINI NINI UKUMKANIKAZI WEXESHA LASEMZANTSI 5 KWINETFLIX? - IINKQUBO ZETV
Uza nini nini uKumkanikazi weXesha laseMzantsi 5 kwiNetflix?
Ukusekwa kwinoveli eyaziwayo yeArturo Pérez-Reverte ethi 'La Reina Del Sur,' uKumkanikazi wase Mzantsi ujikeleza kumfazi ogama linguBraga
Ukusekwa kwinoveli eyaziwayo ka-Arturo Pérez-Reverte ethi 'La Reina Del Sur,' uKumkanikazi wase Mzantsi ujikeleze umfazi ogama linguBraga Teresa Mendoza onyanzelwe ukuba abaleke kwivenkile ethengisa iziyobisi eMexico kwaye abalekele ekugqibeleni anyukele emandleni kurhwebo lokuthengisa iziyobisi ubukumkani bakhe.
UKumkanikazi wase Mzantsi ufumene umlandeli omkhulu olandelayo kwihlabathi liphela kwaye ukalwe nge-8/10 kwi-IMDB kwaye ngumdlalo wokurhanelwa kolwaphulo-mthetho ofumene abaphulaphuli bakhe bencamathele kwizikrini zabo ngalo lonke ixesha lonyaka kwaye kulandela iimpendulo ezakhayo kunye neempendulo ezilungileyo. esinye isavenge kolu luhlu yayiyinto sonke ebesiyilindele ngexhala, ke ngoku ufika nini uKumkanikazi wesizini yasemzantsi 5 kwaye konke kugcinelwe thina, masifumanise!
UKumkanikazi weXesha laseMzantsi 5: Umhla wokuKhutshwa
Sigqithile ngaphezulu konyaka ukusukela oko sabukela ukufakelwa kwenkosikazi ka-mzantsi wasezantsi kukhutshwa ngo-Agasti ka-2019. wenza ukubuyela e-USA kwaye wade waphela ngoJuni 2021, nangona kunjalo, iphambili yayo kwiNetflix kunye neqonga le-ott elinjengeHulu lisalinde ukukhutshwa kokugqibela.
Onke amaxesha angaphambili omboniso afike kwinethiwekhi yase-USA ekuqaleni kwaye emva kwesithuba seenyanga ezisibhozo ukuya kwezisi-9 saqala saboniswa kwamanye amaqonga ehlabathi kwaye nako oku ukuba sihamba kunye kwipateni enye sinokulindela inkulumbuso yenxalenye yesihlanu f uthotho ekuqaleni kuka-2022 ngo-Matshi okanye ekuqaleni kuka-Epreli kwaye oku kucingelwayo kuqinisekisiwe nguDecider.
Ukumkanikazi weXesha laseMzantsi 5: Abalingisi kunye noCrew
Inxalenye yesihlanu yalo mboniso uza kuba noPeter Gadiot njengoJames Valdez, uAlimi Ballard njengoMarcel Dumas, uMolly Burnett njengoKelly Anne Van Awken, uHemky Madera njengoPote Galvez, uAlice Braga njengoTeresa Mendoza, kunye no-JT Campos njengo-Boaz Jimenez.
UKumkanikazi weSizini yoMzantsi 5: Zingaphi iziqendu eziza kuhluzwa ngeli xesha?
Amaxesha angaphambili kolu thotho ayeneziqendu ezili-13, kwaye ngeli xesha isixa sesihlanu siza kuba neziqendu ezilishumi kwaye iya kuba lelona xesha lokugqibela kuthotho.
Umthombo: Ekuhlaleni Keeda
Isahluko 1: Fantasmus
Isahluko 2: Ndithatha iManhattan
Isahluko 3: Sukulahlekelwa yingqondo
Isahluko 4: Imeko
Isahluko 5: Imali engakumbi Ingxaki
Isahluko 6: Isilivere okanye iLothe
Isahluko 7: I-Fox kwiChicken Coop
Isahluko 8: Yonke into endiyichukumisayo
Isahluko 9: Bulletproof
Isahluko 10: Isiphelo
Siza kuba yintoni isiQendu seXesha lesi-5?
Ithuba lesi-4 lagqitywa nguJames esazisa ukuba abasebenzi baseRussia bafika, ke kwisahlulo sesihlanu, sinokubona amaRussia kunye neda; Kucacile ukuba kunokongezwa okungaphezulu kumxholo webali lexesha lesihlanu. Sinokubona uTeresa eza nezithintelo ezintsha kwindlela yakhe nendlela ajongana nayo.
UKumkanikazi weSizini yoMzantsi 5: Ngaba ikhona iTrailer yeXesha lesiHlanu?
Ewe iyafumaneka kwiYouTube. Olu luhlu lolwaphulo-mthetho luye lwaphumelela amabhaso aliqela, anje ngeeMbasa ze-Imagen zika-2017 zoMdlalo weThelevishini oPhambili, iActor eyiNkxaso yeThelevishini, kunye nembasa ye-2018 WIN yomdlalo obhalwe ngumfazi. Nangona olu luhlu lusekwe kumfazi ophambili luza kusingisa kwisiphelo salo, kwaye sinokuba nethemba lokuba indawo yokugqibela yolu ngcelele iyadibana nemincili yethu, umboniso sele ubalahlekisile abaphulaphuli ngesiqwenga esinyanzelekileyo kunye nokunikezelwa kokusebenza okunamandla ngabadlali bayo imida yohlobo.
Ke bafana, qaphela phantsi imihla kwaye ubophe amabhanti akho kwangaphambili kwithuba lokugqibela lokufika elonwabisayo; kude kube lelo xesha, hlala nathi ukuze ufumane ukuqonda okungakumbi.
Rick and Morty Ixesha 4 Episode 6 Umhla wokukhutshwa, Cast, iyelenqe, umdla [SPOILERS], New Bonds and Many More
Ixesha leHaikyuu 4 Umhla wokuKhutshwa ubonakala ngathi utyhilwe yiNetflix yokuKhutshwa kuka-2020, iiBond ezintsha, isiQendu, kunye nokuninzi
Umhla wokukhutshwa komntu we-aqua
ngokukhawuleza kunye nomsindo 9 ukusasaza
ilahlekile kwisithuba somhla wokukhutshwa kwe-Netflix